Local gold price drops reflecting global gold price | Myanmar Business Today
Home Business Local gold price drops reflecting global gold price
Gold price in domestic price, reflecting global gold price and dollar rate, lowered afterasudden increase in price following the coup, according to Yangon Region Gold Entrepreneur Association.
The local gold price hit K1.361 million per tical (0.576 oz) on March 1 when the global gold price reached $1,754 per ounce andadollar rate at K1,465.
Gold price, then, eased in the flowing days reflecting dollar rate and global gold price.
On March 8, gold price fell to K1.317 million per tical in the domestic market, while global gold price was $1,699 per ounce and dollar rate at K1,435.
Local gold prices regained an upward trend reaching K1.329 million on Friday, March 11, compared to February’s first week when the local gold prices hit K14 million.
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးနှုန်းနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ စျေး နှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေ စျေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သိရသည်။
မတ်လ ၁ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းရွှေစျေးသည် အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင်1,361,000 (တစ်ဆယ့်သုံးသိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင်) ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါရက်က ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး သည် တစ်အောင်စလျှင် ကန်ဒေါ်လာ 1754 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ စျေးနှုန်းမှာ လည်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် 1465 ကျပ်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် မတ်လ ပထမပတ်အတွင်း မြန်မာ့ရွှေ စျေးနှုန်းများသည် ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး နှင့် ကန်ဒေါ်လာ စျေးနှုန်းများမှာလည်း ကျဆင်း ခဲ့သည်။
မတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရွှေစျေးသည် အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် 1,317,000 (တစ်ဆယ့် သုံးသိန်း တစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်)ဖြင့် စျေးပိတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး သည် တစ်အောင်စလျှင် ကန်ဒေါ်လာ 1699 ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ စျေးနှုန်းမှာလည်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် 1435 ဖြင့် စျေးပိတ် ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းရွှေစျေးသည် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ပထမပတ်တွင် အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၄ သိန်းအထိ စျေးတက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း တွင် ကျပ် ၁၃၉၀၀၀၀၊ ကျပ် ၁၃၈၇၀၀၀ ၊ ကျပ် ၁၃၆၉၀၀၀ တို့ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Previous articlePrivate banks remain closed despite Central Bank’s order